Emily muParis - Netflix akatevedzana anodzoka nemwaka wechipiri | Bezzia
'Emily muParis' anodzoka nemwaka wake wechipiri paNetflix
Susana godoy | 30/11/2021 14:00 | Nhau
Kana iwe uchida nyika yemafashoni, yakasanganiswa nezviitiko zvitsva, adventures uye nzvimbo dzakanaka seParis, zvirokwazvo iwe ungade nhevedzano senge. 'Emily muParis'. Nokuti zvose zvake zvinowira murudo uye naizvozvo nguva yake yechipiri ichabudiswa munguva pfupi, mushure mokunge tasiya isu neuchi pamiromo yedu mushure mekupera kwekutanga.
Lily Collins ndiye protagonist mukuru yenhevedzano iyo, nekuva nezvikamu zvipfupi uye chirongwa chizere nematambudziko uye zvitaera zvekupenga, zvakatikochekera. Pasina kukanganwa idzo dzinofamba nemumakona eParis, ayo akanyanya kukosha kunyudza iwe munhoroondo. Saka kuchave nezvakawanda mumwaka wechipiri iwoyo. Ziva zvese!
1 Chii chinonzi 'Emily muParis' chinorondedzera?
2 Mwaka wechipiri weNetflix nhevedzano uchaenderera sei?
3 Vatambi mumwaka wechipiri we "Emily muParis"
4 Ndirini patinogona kuona iyo yekutanga yenhevedzano
Chii chinonzi 'Emily muParis' chinorondedzera?
Emily mukadzi wechidiki anoshanda mukambani yekushambadzira. Asi kambani iyi inotenga bazi muParis uye ndiyo yavanosarudza kuenda kunzvimbo itsva. Kuenda kwaasina kugashira kwaaizotarisira uye anofanirwa kutarisana nevaanoshanda navo vatsva, sahwira mutsva asingamuitire nyore uye nehupenyu hutsva. Kunyangwe iye achaita zvese zvinogoneka kuti awane nzvimbo uye anogara achinyemwerera. Iwe uchaziva hushamwari, rudo uye zvakare kuda matriangles.
Asi ndezvekuti izvi zvese zvakashambidzwa mune izvo zvisingakwanisi kuenda zvisingaoneki, semuenzaniso mifananidzo yeguta reParisian inotiputira mumagumo akanaka anoita kuti tide murudo pakutanga kuona. Pamusoro pe zvipfeko zve protagonist, izvo zvinotungamira stylist mumwechete akashanda pa 'Bonde neGuta'..
Mwaka wechipiri weNetflix nhevedzano uchaenderera sei?
Zvinoita sekuti mwaka wechipiri weiyo 'Emily muParis' nhevedzano ichapa twist kune zvimwe zvinhu zvayakaburitsa muchikamu chekutanga. Kunyanya izvo zvinogadzirwa nazvo 'cliches' pamusoro peFrench. Zvese nezvehunhu hwavo, hune hurombo, uye hupenyu hwavo zvakazara. Mukuwedzera kune pfungwa yokuti kune izvi zvose, avo vakabva kunze kwenyika vakanga vasina kunyatsobatanidzwa.
Asi zvese zvichachinja mumwaka wechipiri kubvira Zvinoita sekuti protagonist anozvinyudza zvakanyanya muguta uye munzvimbo nyowani dzaro, achidzidza mutauro, kanenge kuti vazvidzivirire, uye inotipa chiono chitsva chevagari vayo. Sezvo nhevedzano yakagamuchira kushoropodzwa kwakawanda kune zvataurwa pamusoro apa. Saka, pane zvese izvi tichaona kuti mutambi mukuru anoshanduka sei. Achazviitawo murudo here?
Vatambi mumwaka wechipiri we "Emily muParis"
Vese vatambi vatakaona mumwaka wekutanga, vachadzokera kune wechipiri. Saka tichaona kumwe kushanduka mune ese uye tinovimba zvichave zvakanaka. Sylvie, Julien kana Gabriel achave zvimwe zvezviso zvichatsikitsira zvakare muchikamu chitsva. Nyangwe Zvinoita sekunge kune mamwe mazita matatu anowanikwawo pakukandwa: Alfie, uyo ari murume weBritish, pane imwe pachava nemugadziri Jeremy O. Harris uye pakupedzisira Arnaud Binard uyo angave ari rudo rwemumwe wevanopikisa.
Ndirini patinogona kuona iyo yekutanga yenhevedzano
Richangopfuura gore mushure memwaka wekutanga, wechipiri uchasvika. Chikamu chinotarisirwa zvakanyanya nevateveri vayo uye chave kupera. Iyo yekutanga ye "Emily muParis" ichave musi waZvita 22. Pamasuwo ezororo reKisimusi, zvinoita sekunge kune akawanda akateedzana anodzoka uye wechidiki Cooper, zvakare. Saka, kana wanga usina, ichi ndicho chimwe chezvirongwa zveKisimusi zvakakwana nekuti sezvatataura, zvikamu zvaro zvipfupi uye unogona kuzvipa iwe marathon yawaida. Wakamboona chikamu chake chekutanga here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » 'Emily muParis' anodzoka nemwaka wake wechipiri paNetflix
Zvikonzero zvekuisa chituru mukushongedza kwemba yako
4 kudya kwemasikati kune utano kuenda kubasa